Maxaa IETT u noqday Maamulka Awooda Gaadiidka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMaxay IETT u noqotay Hay'adda Qandaraaska ee Gaadiidka
05 / 09 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Metro, TURKEY
Qoraaga Republican-ka Çi Tdem Toker wuxuu dhaleeceeyey hindisooyinka laga sameeyay garoonka diyaaradaha 3 maqaalkiisa cinwaan looga dhigay ulaşım Gaadiidka Gawaarida Qulqulka bugün ayaa maanta la daabacay wuxuuna cadeeyay in İETT ay u rogtay hay'ad qandaraas.
Articleiğdem Toker maqaalka waa sida soo socota:
Bilaabidda tirinta illaa furitaanka 3. Waqti looga fiirsado arrinta gadiidka garoonka diyaaradaha:
Wasaaradda Gaadiidka, Gayrettepe -3. gegada diyaaradaha ee maddaarka ayaa la qabtay dhamaadka 2016. Maalmihii lagu muujinayay isweydaarsiga lacagaha, iskaashiga Senbay-Kolin, oo bixiyay 999 milyan 769 kun oo Euro, ayaa lagu bixiyay habka casuumaadda iyo qandaraaska oo ka sarreeya Euro. 3.5 bilyan TL wakhtigaas waxaa lagu shaacin doonaa heerka maalgashiga, 7.6 bilyan ginni qiyaasta sarrifka maanta.
Wasaaradda Gaadiidka, 3. garoonka diyaaradaha - Halkalı Qandaraaska tareenka ee Feebaraayo 2018'de. 4 bilyan 294 milyan 713 kun oo TL dalab ah waxaa sameeyay Özgün Yapı-Kolin.
3 ayaa laga sameeyay TL. Airport-Halkalı Markaan u soo galno qandaraaska dhulka hoostiisa ee Euro heerka sarrifka hadda, waxaan gaarnaa qiime maalgashi oo qiyaastii ah 7.2 bilyan TL. Sidaasoo kale, waxaa la dhihi karaa in maalgashiga laba layn oo dherer ahaan dhan dhererkiisu yahay 66 kiiloomitir qiyaastii ah 15 bilyan TL. Waayo, haatan.
Nidaamka tareenka hal mitir
Kolin Construction, muwaadin 3. Waxa intaa u dheer in ay tahay qandaraasle wada jir ah oo ah laba khad waaweyn oo metro oo bixin doona gaadiid geeya garoonka diyaaradaha, 3. waa mid ka mid ah shanta shirkadood ee sameeya 'İGA A.Ş.
Dhanka kale, 3. Özgün Yapı iyo Şenbay İnşaat waxay ku xiran yihiin Bayburt Group, tusaale ahaan shirkadaha isla wadaaga.
Dhinac ahaan, iyada oo aan qorshaha laga dhigin kan ugu weyn ”maalgashiga maddaarka adduunka, muxuu yahay inaanan awoodin karin in la diyaariyo nidaam tareen hal mitir ah haddii aan loo sii qorsheyn ama si aan macquul ahayn u socdo?
Way iska cadahay bilowga in arrimuhu u socon doonin sidii loogu talagay safka hore ee tareenka, kaas oo lagu dhawaaqay inuu ku dhammeysan doono heerka wasiirka 2018.
3 ilaa garoonka diyaaradaha 10 sanadka, ganacsiga Baska 150 ee qadka 18; Shaki kuma jiro sababta hay'ad la aasaasay sida IETT, oo ah sababta jiritaankeeda, ay u qaban karto lafteeda, laakiin ay u noqotay hey'ad wax soo iibsaneysa.
Haddii ikhtiyaarka raacitaanka baska uu qasab ku ahaa soo celinta maalgashiga tareenka ee 15 bilyan oo TL ah bilowgii bilowgi hore, ma lagama maarmaan ma tahay in lacagaha loo wareejiyo shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay?
Mise waxay qaali ku noqon lahayd IETT abaabulka iyo socodsiinta ganacsiga gadiidka baska maalmahan marka heesaha keydka dib loogu faafiyo dadweynaha? Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda iyo Istaraatiijiyadda iyo Madaxtooyadda Madaxweynaha waxay u badan tahay inay garanayaan jawaabta su'aashan.
Waxaan la kulmi doonnaa oo arki doonnaa cawaaqibta ka dhalanaysa in aan gaarno garoonka diyaaradaha ee dunida ugu weyn, sida jeebabka gubashada, badbaadinta amniga, iyo bilaabidda sicir-bararka.
Waxaa martigeliyay hooyadii shahiiday afduubka darawalka baska ee xafiiskiisa
Maxay ahayd sababta gaadiidka magaaladu u curyaantay magaalada Bursa
3. Gaadiidka Garoonka
Gayrettepe-3. Madaarka Metro